Kpop မိတ်ကပ်ဘုရင်မကြီး PONY – Korea Celebrities Fans
Date: May 10, 2017Author: KOREA CELEBRITIES FANS0Comments
Pony Effect ဆိုရင်တော့ Branded မိတ်ကပ် တွေကို ကြိုက်တဲ့သူတိုင်းသိပါလိမ့်မယ် ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Makeup Artist တော်တော်များများသုံးကြတဲ့ Brand တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီ Brand ရဲ့ ကနဦးပဲ့ကိုင်သူကတော့ တောင်ကိုရီးယား Kpop မိတ်ကပ်ဘုရင်မကြီးလို့ တင်စားရလောက်တဲ့ Pony ကိုယ်တိုင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
Pony ကို ဇန်နဝါရီ ၂၂ ရက် ၊ ၁၉၉၂ မှာမွေးပါတယ် ။ Pony ရဲ့ နာမည်အရင်းကတော့ ပက်ခ်ဟေမင် ဖြစ်ပါတယ် ။
ဘာကြောင့် Pony ဟာ အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ တောင်ကိုရီးယားထိပ်တန်း မိတ်ကပ်ဆရာမဖြစ်နေရတာလဲ ? သင်မသိသေးတဲ့ PONY အကြောင်းတွေက ဘာဖြစ်မလဲ ?
PONY ကအရောင်တောက်တောက်တွေကို မကြောက်ဘူး
တစ်ချို့သော မိတ်ကပ်ဆရာတွေက အရောင်တောက်တောက်တွေ မသုံးရဲကြဘူးလေ ။ PONY ကတော့ အရောင်တောက်တွေကို မမှုပါဘူး ။
CL ရဲ့ Makeup Artist ပါ
PONY ဟာ လက်ရှိမှာ Queen CL ရဲ့ မိတ်ကပ် Artist တစ်ယောက်ပါ ။ CL အနေနဲ့ Kpop Fashion Icon ဖြစ်လာတာ PONY ရဲ့ လက်စွမ်းတွေ အများကြီးပါပါတယ် ။
သူဟာ Graphic Designer တစ်ယောက်ပါ
A post shared by PONY 포니 (@ponysmakeup) on Oct 12, 2015 at 10:12am PDT
PONY ဟာ graphic design ဆွဲရတာဝါသနာပါပြီး တက္ကသိုလ်မှာလည်း သင်ယူနေပါတယ် ။
သူမက အလှအပနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ စာအုပ်တွေ ရေးခဲ့ပါတယ် ။
Youtube မှာ ပရိတ်သတ်တွေ အများကြီးရရှိထားပါတယ်
သူမရဲ့ အလှအပ သင်ခန်းစာတွေအတွက် သူမဟာ Youtube မှာ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းက ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ အားပေးမှု ရရှိထားပါတယ် ။
ကိုယ်ပိုင် Brand ရှိပါတယ်
Shine Easy Glam, upgraded 😎 The face of K-beauty is back with improved palettes- better formulas, larger pans, and gorgeous packaging ❤️ 50% OFF foralimited time only! Pictured: Shine Easy Glam 1
A post shared by Memebox (@memebox) on Oct 15, 2015 at 12:36pm PDT
PONY Eeffect လို ကမ္ဘာကျော် Makeup Brand ကို ပိုင်ဆိုင်ထာတာပါ ။
Previous Previous post: ဖက်ရှင်ချင်းတူနေတဲ့ EXO Kai နဲ့ ပိုင်တံခွန်
Next Next post: ရွေးကောက်ပွဲမှာ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ 2NE1 ပက်ခ်ဘွန်း